Fisoratana anarana - WoW Guides | WoW mpitari-dalana
Ny mpanora-dalàna dia hamorona glyph izay hanatsara na hanova ny fomba fiasan'ny sasany amin'ireo fahaizantsika.
Zandalari sy Kul tiras Enrollment Guide - 1 ka hatramin'ny 150
ny Adrian Da Cuna hace 4 taona .
Aloha! Amin'ity torolàlana momba ny fisoratana anarana Zandalari ity sy ny tsipika Kul dia manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 150 dia hampianarinay anao ny handeha amin'ny làlana ...
Misoratra anarana amin'ny ady ho an'i Azeroth
ny Sofia Vigo hace 4 taona .
Salama daholo. Androany aho mitondra aminao ny vaovao momba ny asa Inscription in Battle for Azeroth. Rehetra…
Torolàlana ho an'ny fisoratana anarana 1-800
ny Adrian Da Cuna hace 5 taona .
Aloha! Amin'ity Torolàlana momba ny fisoratana anarana ity manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 800 dia hampianarinay anao ny fomba fivezivezena amin'ny fomba mora sy haingana indrindra ...
Torolàlana ho an'ny fisoratana anarana amin'ny legiona
ny Ignacio Pineiro hace 6 taona .
Hey, tsara ho an'ny rehetra indray! Sibê aho ary anio dia hitondrako anao ny iray amin'ireo asa sahanin'ny ...
Torolàlana fisoratana anarana 1-700 Warlords of Draenor
ny totozy hace 7 taona .
Tongasoa eto amin'ny torolàlana fisoratana anarana 1-700 an'ny GuideswoW, amin'ity torolàlana manaraka ity dia afaka mahita ny fomba fiakarana avy any ...
Torolàlana ho an'ny fisoratana anarana 1-600
ny Wow mpitari-dalana hace 10 taona .
Eto izahay dia mitondra torolàlana momba ny fomba fampidirana ny Asa fisoratana anarana amin'ny fomba haingana indrindra amin'ny haavo 1 ka hatramin'ny 600.
Inscription dia asa iray mamela anao hanao, indrindra, glyphs ho an'ny World of Warcraft kilasy, na dia manana zavatra hafa izay mendrika.
Mba hiakarana an'ity asa ity dia tena ilaina ny mampiasa azy Herbalism na dia tsy izany aza dia tsy maintsy mandehandeha any anaty kitapo volamena ianao ary miomana hamela harena be ao amin'ny Auction House.
Torolàlana ho an'ny fisoratana anarana 1-525
ny Naini hace 11 taona .
Niverina ny Deathwing ary niova ny zava-drehetra. Betsaka ny zava-baovao ... Nefa eto izahay mitondra torolàlana momba ny fomba fampidinana ny Asa fisoratana anarana amin'ny fomba haingana indrindra amin'ny haavo 1 ka hatramin'ny 525.
Sasao ny rihinao ary miomàna hanararaotra ny ankamaroan'ny zavamaniry izay monina ao Azeroth.
Torolàlana ho an'ny fisoratana anarana 450-525
ny Potox hace 11 taona .
Ny tanjon'ity torolàlana ity dia ny hampiseho aminao ny fomba mora indrindra hiakaranao Misoratra anarana avy amin'ny haavo 450 ka hatramin'ny 525. Angamba mbola tsy nampakatra ianao Fisoratana anarana manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 450, aza adino ny mitsidika ny anay Torolàlana momba ny fisoratana anarana hahatratra ny haavon'ny max alohan'ny hanombohan'ny Cataclysm. Ho an'ity dia tsy hampiasa afa-tsy amin'ny herisetra na novidiana tamin'ny mpivarotra izahay. Niezaka ny hampiasa fitaovana vitsivitsy araka izay tratra izahay.
Mba handrosoana amin'ny fisoratana anarana dia mila ireo zavamaniry vaovao nampidirina ao amin'ny Cataclysm isika. Ity dia Ash Flower, Windvine, Voil of Azshara, Flower Flower, Twilight Jasmine, ary Whiptail. Amin'ny fikolokoloana azy ireo no hahazoantsika Ashen Pigment na, mahalana, Afo mirehitra.
Azontsika atao ny manomboka amin'ny haavo 425 manao Blackfang Ink izay hampiasaintsika amin'ny fizotrantsika.
ny Naini hace 12 taona .